Maamulka Puntland oo soo bandhigtay maxaabiis ka tirsanaa Al-Shabaab | KEYDMEDIA ONLINE
Maamulka Puntland oo soo bandhigtay maxaabiis ka tirsanaa Al-Shabaab
Sababihii fududeeyay weerarka xabsiga Boosaaso ayay ku sheegeen in maxaabiista Al-Shabaab loo fasaxay adeegsiga taleefoonada, taasoo u fududeysay in ay si toos ah ula socdaan dhaqdhaqaaqa xabsiga ka jira.
BOOSAASO, Soomaaliya- Maamulka Puntland ayaa soo bandhigay qaar ka mid ah dagaalamayaashii Al-Shabaab ee weeraray xabsiga magaalada Boosaaso iyo tiro maxaabiis Al-Shabaab ah oo dib loo soo qabtay, kaddib markii ay ka baxsadeen xabsiga Boosaaso.
Maxaabiistan ayaa ka warramay qaabkii loosoo qorsheeyay dagaalkii Al-Shabaab ku qaadeen xabsiga Boosaaso, oo ay kala baxeen tiro maxaabiis ah.
Sababihii fududeeyay weerarka xabsiga ayay ku sheegeen in maxaabiista Al-Shabaab loo fasaxay adeegsiga taleefoonada, taasoo u fududeysay in ay si toos ah ula socdaan dhaqdhaqaaqa xabsiga ka jira.
Macluumaadka ay maxaabiista bixiyeen waxaa qeyb ka ah, in bil walba lacag dhan kun dollar Al-Shabaab u soo diri jirtay maxaabiista kaga xiran xabsiga, laacagtaas waxay ku soo hagaajin jireen sarkaal ka tirsan maamulka xabsiga oo kadibna lacagta u kala qeybin jiray maxaabiista A-Shabaab, sida ay tilmaameen qaar ka tirsan maxaabiista la wareystay.
Mid ka mid ah maxaabiista la wareystay ayaa xusay in nin lagu magacaabo Mukhtaar oo ka tirsanaa maxaabiista xabsiga ku jirtay ay si toos ah ula soo xiriiri jireen Al-Shabaab, iyagoo markii dambe ogeysiiyay inay xabsiga soo weerarayaan, si ay xabsiga uga soo badbaadiyaan maxaabiista.
Bilowgii bishii March ee sannadkan 2021, ayay aheyd markii dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay weerar qorsheysan ku qaadeen xabsiga Boosaaso, kaas oo qeyb ka ah weeraradii ugu adkaa ee Al-Shabaab ay ka geystaan gudaha Puntland, waxaana u suurto gashay in la baxaan saraakiil muhiim ah oo muddo dheer xabsiga uga xirnaa iyo kuwa dil sugayaal ah.